Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray ama lumay Files From iPhone 4s iyo iPhone 5
> Resource > Ladnaansho > 2 Talaabada inuu ka soo kabsado tirtiray ama u Khasaaray Faylal ay ka iPhone 6 Plus / 6/5 / 5S / 5C / 4s
Iyadoo 6s cusub brandly iPhone ama iPhone 6s Plus on gacanta, qaar ka mid ah dadka isticmaala ay encounted dhibaatooyinka soo socda: xog qalad ah tirtiray 6s iPhone aad (Plus), Old xogta laga badiyay ka iPhone 6 marka lagu casriyeeyo si macruufka 9 nidaamka. Waxay ku fikiray ku saabsan dhow jid kasta oo dib u soo ceshano xogta laakiin aan waxtar lahayn oo dhan.
Ha welwelin, waxaad soo kaban karto xogta ka iPhone (macruufka 9 taageeray) la soo kabashada xogta ah: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (dadka isticmaala Windows) .Waa wax xog ah iPhone universal qalab kabashada muddo ku dhow oo dhan taxane iPhone oo ay ku jiraan ugu dambeeyay 6s iPhone kulul (Plus). Waxaa xitaa wax ku ool ah inay ka soo kabsadaan Lugood gurmad files of taxane iPad. Waxaa Qeybaha noocyo badan oo files ka iPhone Lugood si fudud gurmad: aad xiriirada, SMS, sawiro, videos, qoraalo, jadwalka cadaymaha cod, iyo qaar kaloo badan! Iyada oo taageero u ah, waxaad soo kaban karto, files tirtiray ama laga badiyay ka iPhone sida aad rabto.
Iyadoo version cusub ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (labada versions), oo aad horay u soo kaban karto xogta si toos ah uga iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5S / 5C / 4s. Currently 7 nooc file waxaa taageera hab kabashada taas, oo ay ku jiraan farriimo, xiriirada, taariikhda wac, jadwalka, qoraalo, xusuusinta iyo Safari bookmark.
Waxa ay haatan u download, waxaa jira version maxkamad in aad soo saaro karo oo ku eegaan oo dhan content ee faahfaahin ah.
Qeybta 1: Ladnaansho Khasaaray Data si toos ah uga iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5S / 5C / 4s
Qeybta 2: Sawirka iyo Macdan Lugood gurmad inuu ka soo kabsado iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5S / 5C / 4s Data
Tallaabada 1. Download Wondershare Dr.Fone hore. Connet iPhone aad la your computer iyo bandhigista Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Door "kabsado qalab macruufka ah", ka dibna waxaad arki doonaa interface ah taas oo aad ka warrami in qalab aad xiran yahay. Guji "Start Scan" in ay sii wadaan.
Tallaabada 2. Barnaamijku wuxuu bilaabi doonaa xogta iskaanka aad iPhone si toos ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay sugto dhamaadka iskaanka iyo hubiyo natiijada iskaanka ah.
Tallaabada 3. Marka gool scan ah, dhammaan xogta la helay ay noqon doontaa liiska in qaybood. Waxaad ku eegaan karo wax badan oo ka mid ah si ay u hubiso in ay yihiin waxa aad rabto inuu ka soo kabsado ama aan.
Waxaad dooran kartaa "muujiyaan oo kaliya waxyaabaha tirtiray" si aad u hubiso inta lumay waxyaabaha la helay by Dr.Fone. Markaas waxaad dooran kartaa faylasha aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad u computer badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Dr.Fone taageertaa badan oo soo kabashada noocyada file si toos ah uga iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5S / 5C / 4s, si ka kooban warbaahinta ka helay sida sawirada, video, fariimaha, xiriirada, qoraalo, waano, iyo in ka badan waxyaabaha yihiin kuwa hadda jira ee aad iPhone (macruufka 9 taageeray).
Qeybta 2: Sawirka iyo Macdan Lugood gurmad inuu ka soo kabsado iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5S / 5C / 4s
Tallaabada 1. Isku aad iPhone (macruufka 9 taageeray) si aad PC / Mac, oo ay maamulaan Wondershare Dr.Fone on your computer. Sida aad arki karto in image u dabagal, diiwaanka gurmad oo dhan Falanqeynta iDevices 'la soo daabici doonaa. Dooro magacaaga qalab iPhone oo guji "Start Scan".
Notes: Fadlan ha u hagaagsan aad iPhone la Lugood marka la isticmaalayo barnaamijka Wondershare iPhone Data Recovery. Waxa si fudud waa in overwrite aad files lumay.
Tallaabada 2. daqiiqado yar gudahood, scan inuu kusoo dhamaan doono. Files Waxaad iPhone in lagu taageeray-up la Lugood la soo daabici doonaa sida soo socota:
Waxaad ku eegaan karo dhammaan faylasha helay natiijada scan, oo wuxuu kor ugu waa in aad u go'aansato mid ka mid ah inuu ka soo kabsado ama inuu ka soo kabsado iyaga oo dhan. Waxaad iyaga ku riixi kartaa mid mid si ay u doortaan, taas oo ka mid ah dib u soo ceshano ka dibna riix "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Marka files tirtiray waxa lagu soo kabsaday, waxaad iyaga ku badbaadin karaan on your computer sidii gurmad ah. Waa maxay dheeraad ah, haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan photos soo kabsaday, video iyo xiriirada dib si aad u iPhone, waxaad isticmaali kartaa Wondershare TunesGo loo sameeyo in qasabno yar.
Wax waa in aad ogaato oo ku saabsan Data Recovery ka Lugood raad raac ah oo iPhone 6s Plus / 6s (Plus) / 5 / 5S / 5C / 4s:
Sida aynu wada ognahay, marka aad u hagaagsan aad iPhone la Lugood, dhammaan faylasha aad iPhone (macruufka 9 taageeray) si toos ah ahbaa doona Lugood sida file ah oo la kordhin (.sqlitedb), lama straightly dhoofin kara si aad u computer, ma in la akhriyo on your computer. Markasta oo aad soo kabsado xogta la Lugood, xiisaha aad xogta laga hadli doono. Wondershare Dr.Fone Waa aalad muhiim u ah in aad si looga hortago dhibaatooyinka noocaas ah.